Momba anay - Laizhou Dongsheng Valve Co., Ltd.
Laizhou Dongsheng Valve Co., Ltd dia matihanina valves orinasa, dia fanangonana ny fikarohana sy ny fampandrosoana, famolavolana, ny fanamboarana, ny fivarotana ny Integrated manokana orinasa nanomboka tamin'ny 2002. Mitana andiana siantifika sy henjana rafitra fitantanana, matanjaka ara-teknika hery, fitaovana fanodinana mandroso sy fandrosoana ara-teknika mitombina, teknolojia avo lenta ary teknisianina sy mpiasa.Ny faritry ny orinasanay dia 30.000 metatra toradroa ary manana mpiasa 148.Taorian'ny 19 taona nifantoka, dia nivoatra ho eran'izao tontolo izao-malaza tsipìka famokarana fototra, ary ny vokatra dia aondrana any Eoropa, Amerika, Afrika, Azia Atsimo Atsinanana, Aostralia sy ny hafa mihoatra ny 70 firenena sy ny faritra.
Ny vokatra fototra dia andian-tsangantsanganana fanamarinana, ao anatin'izany ny karazana kapila tokana swing check valve, double disc swing check valve, flange sy threaded ball check valve, flange sy wafer type silent check valve, lift check valve, diaphragm valve, ball valve ary lolo valves sns Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny solika, orinasa simika, famatsiana rano sy drainage, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, fitaovana fanadiovana rano, etona, ranon-tsakafo sy ny rafitra fantsona hafa, mifantoka amin'ny avo-end valve vokatra eo amin'ny tsena Eoropeana sy Amerikana.Ny orinasa dia manana teknolojia famokarana avo lenta, fitaovana, rafitra fitantanana sy fanaraha-maso ary fenitra, ary efa nandalo fanamarinana rafitra kalitao ISO9001 sy fanamarinana CE.
Manome vokatra valva kalitao avo indrindra sy vahaolana mivaingana mety indrindra ho an'ny mpampiasa manerantany.
Lasa orinasa benchmark valva izay reharehan'ny mpiasa, hajain'ny indostria ary atokisan'ny mpanjifa indrindra.
Miorina amin'ny fahamendrehana, miezaha ho velona amin'ny kalitao, mandresy amin'ny fahatsarana, ary mahereza amin'ny fanatsarana
Fahamarinana: Ny fahamendrehana sy ny fahatokisana no toetra fototry ny maha-olona, ​​ary ny fitantanana marina no fepetra fototra amin'ny fampandrosoana ny orinasa.
Mivelona amin'ny kalitao: Ny kalitao no fototry ny fahaveloman'ny orinasa, ny vato fehizoron'ny fampandrosoana, ary ny fitaovam-piadiana majika ho an'ny fahombiazana.
Mandresy amin'ny fahatsarana: Mandresy mpanjifa sy ny tsena amin'ny endrika tonga lafatra, kalitao tsara, fampisehoana tsara, vidiny mirary ary serivisy feno fiheverana.
Hamafiso amin'ny fahitsiana: amin'ny alàlan'ny fitantanana voadio, fitaovana be pitsiny, ary refy mazava tsara, dia afaka manamboatra vokatra faran'izay tsara isika.Ny fenitry ny vokatra indostrialy mifototra amin'ny fepetra takian'ny asa tanana dia nahazo ny fiderana sy fahatokisana ny mpanjifa manerana izao tontolo izao.
Fahamarinana sy fahitsiana, fanoloran-tena sy fahazotoana, firaisan-kina sy pragmatisma, mpisava lalana ary zava-baovao.
Niorina tamin'ny taona 2002 ny orinasa ary nifantoka tamin'ny famokarana valva lolo.
Tao anatin'ny roapolo taona lasa teo amin'ny fampandrosoana, ny orinasa dia namorona andian-dahatsoratra efatra lehibe ao anatin'izany ny valva fanaraha-maso, ny valva diaphragm, ny valva baolina ary ny valva lolo, miaraka amin'ny vokatra am-polony sy ny famaritana an-jatony.Ny fitaovana dia misy vy, vy, varahina ary vy tsy misy pentina.
Ny orinasa dia nahavita ny fanavaozana indostrialy ny andiana vokatra ara-drafitra avy amin'ny vokatra tokana taloha.Ankehitriny dia nivoatra ho lasa fototra famokarana valva tsy miverina malaza eran'izao tontolo izao, ary ny vokatra avy amin'ny orinasa dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 70 toa an'i Eoropa, Amerika, Afrika, Azia Atsimo Atsinanana ary Aostralia.
FAHASALAMANA SY FAHAFATESANA Orinasa
TONTOLO IZAO TONTOLO IZAO SY NY TONTOLO IZAO
Manana traikefa maherin'ny 18 taona izahay mpanamboatra sy fanondranana.
Manana taratasy fanamarinana CE sy ISO9001 izahay.
Manome garantie 1 taona izahay.
Manao fitiliana fanerena ho an'ny valva tsirairay izahay alohan'ny hanangonana azy.
Manana fikarohana sy fampandrosoana matihanina izahay, vondrona mpanamboatra.